6-da huteel ee ugu wanaagsan Copenhagen sanadka 2021 | Wararka Safarka
Copenhague waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu caansan Danmark. Jawiga lagu neefsaday jidadkeeda iyo qadarka qorshooyinka la bixiyo caasimada Denmark ka dhig ikhtiyaar aad u soo jiidasho leh oo aad dhawr maalmood ku qaadato fasax. Si kastaba ha noqotee, sida badanaa ka dhacda magaalooyin kale oo leh soo jiidasho dalxiis, hel hudheel jaban oo aan xarunta aad uga fogayn waxay noqon kartaa qarow. Sidaa darteed, waxaan kuu soo bandhigeynaa lixda hudheel ee ugu wanaagsan Kobanheegan, oo ay ku jiraan hoy jaban oo u dhow bartamaha magaalada.
1 Hoteelka CitizenM Copenhagen Radhuspladsen
4 Hotelka Apperon Apartment
6 Hoteelka Ottilia ee Hoteelada Brøchner
Hoteelka CitizenM Copenhagen Radhuspladsen
Xulashada ugu fiican haddii aad raadineyso tayo iyo hudheelo u dhow bartamaha Kobanheegan. Waxay ku taal Magaalada dhexdeeda, hudheelka CitizenM Copenhagen Radhuspladsen waa hoy aad u xiiso badan haddii aad raadinayso raaxo qiimo jaban. Xusuusnow in Copenhagen aysan ahayn magaalo jaban. Si kastaba ha noqotee, qiimaha hudheelkan, ee loogu talagalay hudheelka 4-xiddigeed, waa mid macquul ah oo quraac ayaa lagu daray. Dhinaca kale, halka ay ku taal waa mid ku habboon haddii aad rabto inaad tamashle tagto adigoon waqti badan ku qaadin gaadiidka. Hoteelku wuxuu ku yaal meel 600 oo mitir u jirta Tivoli Gardens, mid ka mid ah jardiinooyinka madadaalo ee ugu da'da weyn Yurub taas oo shaki la’aan noqon doonta mid ka mid ah qodobbada muhiimka ah ee booqashadaada magaalada.
Shaki la'aan, ugu fiican ee CitizenM Copenhagen Radhuspladsen waa qurxinteeda casriga iyo midabada leh taas oo u horseedda martideeda farshaxanka deenishka. Socdaalku waa hab aad ufiican oo looga baxo howlaha caadiga ah, markaan safreyno sidoo kale waxaan raadineynaa inaan baranno waxyaabo cusub oo aan laxirirno dhaqamada kale. Darbiyada hudheelkan Waxay ku daboolan yihiin rinjiyeynta iyo muraayadaha farshaxanka deenishka. Sidaas awgeed, joogitaanka martidu waxay noqoneysaa khibrad u oggolaaneysa iyaga inay wax badan ka bartaan dhaqanka Danmark.
Ikhtiyaarka ugu habboon haddii aad raadineyso hudheelo jaban oo ku yaal Kobanheegan iyo nolosha habeenkii. Generator Copenhagen waa hoy ku habboon dhalinyarada oo raba inuu sii joogo meel loogu talagalay qaamuus iyo madadaalo. Hoyga waxay leedahay bar habeen weyn Dhacdooyinka, karaoke iyo bandhigyada DJ ayaa la abaabulay, waa meel ku habboon in lagu yeesho is biirsaday, la kulmo safrayaasha kale oo lagu raaxeysto muusig wanaagsan. Waa meel aan lagu seexan karin oo keliya, waxaad ku noolaan kartaa nolol badan hoteelka dhexdiisa.
Si kastaba ha noqotee, haddii aad doorbideyso inaad baxdo, soco oo aad barato magaalada, hoygan sidoo kale waa ikhtiyaar wanaagsan. Waxay ku taal 7 daqiiqo oo keliya xarunta mitrooga ee Kongens Nytorv aadna ugu dhow Frederiks Kirke (Kaniisada Marble) iyo Amalienborg Palace, ayaa muhiim u ah booqashadaada magaalada.
Qolalka ugu jaban waa la wadaagayaa, wax dhibaato noqon kara haddii aadan u baran inaad ku seexato hoteelada nuucaan ah. Si kastaba ha noqotee, kuwa u baahan asturnaan dheeraad ah, hoyga sidoo kale waxay bixisaa suurtagalnimada keydinta qolalka gaarka loo leeyahay. Faa'iidada kale ee Generator Copenhagen waa taas soo dhaweyntu way furan tahay 24 saacadood, markaa wax dhibaato ah kala kulmi maysid haddii aad taas sameyso Is xaadiri ama baadhid goor dambe oo subax ah.
Ikhtiyaar wanaagsan ayaa loogu talagalay kuwa raadinaya hudheelo raqiis ah oo ku yaal Kobanheegan oo leh adeeg macaamiil oo fiican. CityHub Copenhagen waa hudheel casri ah oo waxay u taagan tahay fiiro gaar ah waxay u fidiyaan macaamiishooda. Hoteello badan oo ku yaal Kobanheegan ayaa ku soo daray teknoolojiyaddooda maalinba maalinta ka dambaysa si ay u horumariyaan adeegyadooda, qaar kiniin ayay amaahdaan martidooda oo xitaa u oggolaadaan inay ku xakameeyaan laydhadhka qolka dhexdiisa iyada oo loo marayo aaladaha noocan ah.
Si kastaba ha noqotee, soo jeedinta CityHub Copenhagen ayaa xitaa ka sii fiican. Adeegsiga tikniyoolajiyadda ayay ku guuleysteen inay ku fidiyaan adeegyadooda wixii ka baxsan darbiyada hoteelka. Waxay abuureen barnaamij ay martidu ku rakibayaan taleefannadooda gacanta bilaash. Codsigan, macaamiisha way ku sheekaysan karaan oo kula xiriiri karaan shaqaalaha hoteelka. Waa aalad aad u wanaagsan oo aad weydiisato talo iyo tusaale inta aad sahamineyso dhammaan jidadka magaalada. Intaas waxaa sii dheer, qolalka waxay leeyihiin sitooro aad kuxiran karto adoo adeegsanaya Bluetooth, waana wax la mahadiyey maadaama, sida caadiga ah, kuma qaadano hadalada shandadeena waana wax caadi ah oo aan inta badan seegno markaan safreyno
Hoteelka ayaa si aad ah ugu xiran xarunta, Kaliya 550 mitir ayaa u jirta saldhiga metro ee Frederiksberg Allé, sidaa darteed dhib kuma lahaan doontid inaad tagto meelaha xiisaha dalxiiska u weyn. Si kastaba ha noqotee, haddii aadan jeclayn inaad raacdo gaadiidka dadweynaha, xusuusnow in Copenhagen ay tahay magaalada baaskiiladaha, waa la kireyn karaa meel kasta! Adoo xoogaa lugeynaya, CityHub Copenhagen waxaad ku gaari kartaa meelaha wakiilka ah sida Matxafka Qaranka ee Danmark ama Frederiksberg Waxay leeyihiin beero wax ka yar toban daqiiqo.
Hotelka Apperon Apartment
Dhamaan raaxada guriga hoteel ku yaal Kobanheegan. Mararka qaar markaan safreyno, ma dareemeyno inaan ku qaadaneyno inta aan joogno oo dhan oo aan wax ka cuneyno makhaayad ilaa maqaaxi, gaar ahaan haddii aanan dooneynin inaan lacag badan ku qarash gareyno oo aan joogno magaalo qaali ah sida Kobanheegan. Haddii aad doorbideyso inaad haysato ikhtiyaarka ah inaad karsato cuntadaada ama haddii aad si fudud u rabto inaad hesho meelo ka ballaadhan qolal hudheel hudheel oo caadi ah, Huteelka Aperon Apartment ayaa ah ikhtiyaar aad u fiican adiga. Guryaheeda yaryar ee leh qaab deenish ah oo calaamadeysan waad ku raaxeysan kartaa dhammaan raaxada guriga, iyada oo aan lumin faa'iidooyinka hudheel.
Sidaa darteed, waxay leedahay jikada casri ah, oo qalabaysan iyo qol waasac ah oo aad ku nasan karto ka dib dhacdooyinkaaga magaalada. Waa ikhtiyaar aad u xiiso badan haddii aad carruurta la safreyso oo fikradda ah inaad isla qol wada seexdaan wax badan idinkaama codsaneyso. Sidoo kale, qaabeynta guryaha waa weyn. Qolalka kala duwan waa kuwo aad u shaqeynaya oo raaxo leh, waxay ka buuxaan dariishado kuu oggolaanaya inaad ku raaxaysato iftiinka dabiiciga ah ee cajiibka ah.
Xagga goobta, hudheelka Aperon Apartment waxay ku taalaa degmada Indre By, oo ah bartamaha ugu badan Kobanheegan, sidaa darteed waxaad heli doontaa ku dhowaad dhammaan meelaha xiisaha leh ee farahaaga. Qalcadda caanka ah ee Rosenborg Castle waxay u jirtaa 700 oo mitir, waadna u lugeyn kartaa Saldhigga Nørreport wax ka yar 5 daqiiqo.
Hoyga ugu habboon ee loogu talagay kuwa u safraya magaalada Kobanheegan ee xagga ganacsiga ah. Wakeup Copenhagen- Bernstorffsgade wuxuu ku yaalaa bartamaha magaalada, degmada København. Goobtu waa mid aad u fiican. Waxay aad ugu dhowdahay meelaha xiisaha weyn u leh dalxiiska iyo a aag ka buuxo nolosha. Huteelka agtiisa, waxaad ka heli doontaa baararka, baararka iyo maqaayadaha aan dhammaadka lahayn ee aad wax ka cunto, ka cabto oo aad ku qaboojiso jawiga caasimadda Denmark.
Si kastaba ha noqotee, waxa huteelkan ka dhigaya liistada 6-da huteel ee ugu wanaagsan Copenhagen sannadka 2020 ma aha oo keliya goobta ay ku yaalliin. Wakeup Copenhagen- Bernstorffsgade waa a hoy ku habboon kuwa u safraya magaalada xagga ganacsiga. Meelaha ay wadaagaan guud ahaan waxaa ku hareeraysan daaqado waaweyn iyo daaqado waa weyn oo kuu oggolaanaya inaad ku raaxaysatid muuqaal qurux badan oo magaalada ah. Meelahan waxay leeyihiin goobo si gaar ah loogu talagalay in lagu shaqeeyo. Waxay leeyihiin a xarunta bussines, oo leh kombuyuutarro si bilaash ah loo isticmaalo, midna wuxuu bixiyaa tiro badan oo boosas ah oo awood u si fiican ugu shaqeeya.
Qolalka waa casriyeysan oo qaabkoodu aad u qurxoon yahay in kastoo aysan aad u weyneyn, haddana waa cabir ku filan. Waxay leeyihiin miis yar, dhibic kale oo ku habboon haddii aadan magaalada u joogin xilliyada firaaqada. Intaas waxaa sii dheer, mahadnaqida ay ugu dhowdahay dekedda Kobanheegan, waxaa jira qolal leh aragtiyo badda qayb ahaan.Yaan jeclaan doonin inuu ku raaxeysto aragtidaas muuqaalka ah markii uu soo tooso?
Hoteelka Ottilia ee Hoteelada Brøchner
Naqshadeynta iyo aragtida 360º ee magaalada Kobanheegan, hudheel ku habboon munaasabadaha gaarka ah. Ugu dambeyntiina, hoyga u qalma in la xiro liiskan 6-da hoteel ee ugu wanaagsan Copenhagen sannadka 2020 waa Hotel Ottilia oo ay maamusho Brøchner Hotels. In kasta oo ay run tahay inaysan u raqiis ahayn oo udub dhexaad u ahayn kuwa kale, waa meel leh soo jiidasho badan, ku habboon munaasabadaha gaarka ah.
Bilic ahaan, hudheelku waa cajiib. Waxaa lagu dhisay wixii ka jiray, in ka badan 160 sano, khamriga ugu caansan dalka Denmark, Carlsberg. Qaab-dhismeedkii hore ee warshaddu wuxuu si aan kala go 'lahayn isugu daraa waxyaabo casri ah oo casri ah. Dhammaan faahfaahinta warshadda waa la hayey. Xitaa dhinaca hore, iyada oo lagu sharfayo 64 gaashaan oo dahabi ah oo ka soo baxay darbiga markii ay khamriyuhu weli yaalliin, waxay daaqado daaqado wareegsan oo yaab leh soo bandhigeen
Hoteelka ayaa bixiya adeegyo badan oo ka mid ah xarumaheeda: adeegga kireynta baaskiilada, isboortiga, jimicsiga, xitaa baararka iyo maqaayada. Intaa waxaa dheer, maalin kasta, hudheelku wuxuu abaabulaa a Saacad farxad leh taas oo khamrigu ka xor yahay martidooda oo dhan, munaasabad ku habboon baashaal iyo nasasho ka dib maalin dheer oo indha indheyn ah.
Shaki la'aan, makhaayadda ayaa ugu fiican hoteelka. Waxay ku taal dabaqa ugu sarreeya ee dhismaha wuxuu leeyahay mid ka mid ah aragtiyada ugu xiisaha badan ee Copenhagen. Sidaas darteed, miisaskooda waxaad ka dhadhansan kartaa cunnooyinka Talyaaniga ee macaan, adigoo ku raaxeysanaya aragti 360º ah oo ku saabsan caasimadda Danmark.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » General » 6-da huteel ee ugu wanaagsan Kobanheegan